Ifulethi elihle ngaphakathi kwebanga lokuhamba enkabeni yeDen Bosch - I-Airbnb
Ifulethi elihle ngaphakathi kwebanga lokuhamba enkabeni yeDen Bosch
's-Hertogenbosch, NB, i-Netherlands
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Inga
Ifulethi elihle/isitudiyo esibhekene nePrins Hendrikpark (Ijzeren Vrouw) kanye nokuhamba imizuzu emi-5 kuphela ukusuka enkabeni ephilayo yaseDen Bosch. I-balcony ebheke ingadi yesigodlo esidala. Indawo yokupaka ekhokhelwayo noma nge-transferium.
Umbhede wezingane uyatholakala uma uceliwe.
Ifulethi lisezingeni eliphezulu lendlu yethu futhi lingenye yezindawo ezinhle kakhulu ngasese! Uphahla oluvulekile lwakha umoya othokomele kakhulu. Sine-air conditioning, isiphephetha-moya eduze kombhede kanye nokukhipha umoya okwanele ukuze kungashisi kakhulu ehlobo. Futhi-ke kuvulandi! Ngenxa yokuthi omakhelwane bethu ngemuva yindlu yezindela endala, unombono wengadi yezindela ukusuka kuvulandi. Ifulethi linomshini wekhofi we-Nespresso, iketela nezinhlobo ezahlukahlukene zetiye nekhofi. Etafuleni elincane kunendawo yokudla kwasekuseni (amapuleti kanye ne-cutlery kunikezwa) noma ukusebenza nge-laptop. Kukhona i-TV yesikrini esiyisicaba esikhulu nesidlali seDVD. Kunezihlalo ezimbili ezithokomele zokuphumula ekhaya.
Sihlala nje uhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka enkabeni ye-Den Bosch. Ngakho-ke maduze nje uzobe usemakethe futhi ungajabulela ubumnandi e-Den Bosch ngezindawo zokudlela ezincane, izitolo ezinhle namathofi. Kodwa naphezu kwendawo emaphakathi ungakwazi ukupaka (ikhokhelwe) phambi komnyango. Futhi ekhoneni kukhona iPrins Hendrik Park enamanzi, izilwane, ikhefi enamakhekhe enziwe ekhaya nokuthula okuningi nesikhala.
Ngokuphambene nendlu yethu esigcawini kuneCoop ukuze uthole okuthile okudliwayo noma okuphuzwayo (amahora okuvula uMsombuluko - Sat kuze kube u-8pm, ngeSonto 12-5 pm).
Ngesikhathi sokuhlala ngokuvamile sizoba khona. Yebo sihlala sitholakala ngemibuzo. Sesihlale isikhashana e-Den Bosch futhi uma sifisa singanikeza amathiphu okudla okumnandi noma ezinye izinto. Futhi ningaba nengxoxo emnandi noma inkomishi yekhofi ndawonye!
Ngesikhathi sokuhlala ngokuvamile sizoba khona. Yebo sihlala sitholakala ngemibuzo. Sesihlale isikhashana e-Den Bosch futhi uma sifisa singanikeza amathiphu okudla okumnandi noma e…